पावर रेंजर्स डिनो थन्डर - अनलाइन
घर » कार्य » पावर Rangers डिनो गर्जनका
खेल जानकारी: पावर Rangers डिनो गर्जनका
विवरण: पावर Rangers दुष्ट देखि दिन सुरक्षित गर्न आवश्यक छ। विभिन्न शक्ति रेंजरों छान्नुहोस्। तपाईं सबै स्तर पूरा गर्न सक्षम छन्?
खेल्नु: 926,508 ट्याग: शक्ति रेंजरों खेल, कोरस, शक्ति रेंजरों
कोरस ब्रेक आकाश मार्फत
आकाश माध्यम तोड्न अनलाइन खेल भनेर 4J.Com मा निःशुल्क खेल्न सक्छन् छ। अब यो सुपर हिरो कोरस त त्यो आकाश मार्फत तोड्न चाहन्छ कि नीरस छ। उसलाई सपना पूरा गर्न मदत गर्न सक्छ?
न्याय लिग: सबै लागि अन्याय
लिनुहोस् कोरस नियन्त्रण र खतरा र साहसिक प्रति न्याय लिग यस सदस्य नेतृत्व। दुष्ट रोबोट सामना र यो घटना पछि खडा गर्ने पत्ता।
, चयन रूपमा पारी कुञ्जी प्रयोग सुरु रूपमा प्रविष्ट गर्नुहोस्, बटन एक रूपमा Z, बटन बी, 1 कुञ्जी रूपमा x
डिसी हास्य सुपर नायक टीम
आफ्नो मनपर्ने सुपर हीरो वर्ण बीच परम 3-मा-3 ट्याग टोली युद्धमा लागि तयार! तपाईंको सुपर टोली छनोट तपाईं, दुष्ट तल लिन अंक हासिल र नयाँ हतियार अनलक हेर्न रूपमा! संग डीसी हास्य सुपर हीरो टोली अप खेल रमाइलो प्राप्त गर्नुहोस्।
यो न्याय लिग: हामीलाई बीचमा देवताहरूको कोरस
यो न्याय लिग सबैलाई तल पिटे दिन जाँदैछन्। यो न्याय लिग: माझमा हाम्रो कोरस देवता